Audio Daily News Archives - WardheerNews
Warka Raadiyo Wardheer ee aan idiin heyno waxaa ka midah:Wasaarada Arimaha Gudaha dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xayiraadka laga qaaday wadamo badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay oo mareykanka horay ugu xayiray iyo warar kale. Fadlan hoos ka dhegeyso … Continued
Wararka aan idiin hayno waxaa ka mid ah: Taliska Amisom ee Soomaaliya oo ka hadlay sababta hortaagan in la furo meelaha ay gooyeen Shabaab ee gudaha Soomaaliya iyo Warar kale. Warka oo dhan hoos ka dhegeyso
Madaxweyne Farmaajo oo maanta u ambabaxaya Itoobiya
Wararka aan idiin hayno waxaa ka mid ah: Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Md. Maxamed C/llaahi Farmaajo gelinka dambe ee maanta u socdaalaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyo Warar kale. Warka oo dhan hoos ka dhegeyso
Warka Raadiyo Wardheer ee aan idiin heyno waxaa ka mid ah: Muqdisho oo lagu wado in laga soo dejiyo dhalinyaro dhawaan laga soo qabtay xarun tababar oo ay Al-shabaab ku lahaayeen duleedka degmada Balcad ee G/Sh.Dhexe iyo warar kale. Fadlan … Continued
Shacab badan oo Soomaaliyeed oo la sheegay inay galaafteen weerarada cirka ee uu Maraykunku la beegsado Al Shabaab
Wararka aan idiin hayno waxaa ka mida ah: Tobanaan shacab ah ayaa ku dhintay n halka kuwo kalena ay ku dhawacmeen kadib markii Mareykanku uu kordhiyay Weerarada ka dhanka ah Al-shabaab sida lagu xusay baaris uu sameeeyay Wargeyska the guardian … Continued
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyay
Wararka aan idiin hayno waxaa ka mid ah: Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo aqbaay xilka qaadistii lagu sameeyay, Ciiddamada Ammaanka dalka Masar oo gacanta ku dhigay 14 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah, ka dibna Xabisg u taxaabay iyo Warar … Continued
Xilkii oo laga qaaday Guddoomiyihii Gobolka Banaadir
Warka Raadiyo Wardheer ee aan idiin heyno waxaa kamid ah: Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray xilkii ka eryey Guddoomiyahii Gobolka Banaadir . Fadlan hoos ka dhegeyso warka Raadiyo Wardheer:
Warka Raadiyo Wardheer ee aan idiin heyno waxaa kamid ah: Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo wareysi siiyay Telefishinka Universal ayaa ka hadlay Arimaha Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, ammaanka iyo taageerada dibadda ee Soomaaliya iyo Warar kale. Fadlan hoos ka … Continued
Warka Raadiyo Wardheer ee aan idiin heyno waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo Sheegtay inay dileen sarkaal Ajnabi ah oo ka tirsan Shabaab, Cadaado oo laga mamnuucay Madaxweyne Xaaf iyo Warar kale. Fadlan hoos ka dhegeyso warka Raadiyo Wardheer:
Warka Radiyo Wardheer ee aan idiin heyno waxaa ka mid ah: Dhuusa Mareeb oo maanta lagu dhameys tiray heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Suna iyo warar kale. Fadlan hoos ka dhegeyso warka Raadiyo Wardheer:
Ciiddamada Dawladda Soomaaliya oo Al Shabaab kala wareegay deegaanka Baar Sanguuni
Wararka aan idiin heyno waxaa kamid ah: Ciiddamada Dawladda Soomaaliya oo Al Shabaab kala wareegay deegaanka Baar Sanguuni oo qiyaastii magaalada Kismaayo u jira 45-KM iyo Warar ka. Warka oo dhan hoos ka dhegeyso
Wararka aan idiin hayno waxaa kamid ah: Deegaanka Ceelgaalow oo saakay ciiddanka Dowlada Soomaaliya ay ka wadaan howlgallo lagu sugayo amniga iyo Warar kale. Warka oo dhan hoos ka dhegeyso